Hariiroon Itoophiyaa fi Suudaan Kibbaa hammaataa dhufuun qabsoo hidhannoof foddaa saaqa – YEROOBLOG
Yerooblog	Horn of Africa, Opinions, Politics	 January 24, 2017 January 24, 2017 1 Minute
Hariiroon motummaan Itoophiyaa fi Suudaan Kibbaa (SK) jidduu jiru hammaataa fi mi’aa fixataa dhufeera. Mootummooni lamaanuu wolhimataa, wolkomataa fi gocha woliitti obsa fixataati kan dhufan. Salvaa Kiir, pirezidaantiin SK, tibbana Masrii gayee deebi’uun isaa shakkii yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaa fi SK wolirraa qabaataa turan dhugoomseera.
Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Suudaan Kibbaa jidduu jiru haalaan dadhabaadha. Mootummaan lamaan yeroo kanatti wolitti gaarriffatu; hidhii walitti ciniinnatu. Itoophiyaan ambaasaadara Suudaan Kibbaa ari’uunis gabaafamee jira. Suudaan Kibbaa garuu dhugaa miit jetti. Michummaan Suudaan Kibbaa Kaayiroo waliin eegalte akka shira hidhaa Abbayyaa gufachiisuuf xaxameetti kan ilaallame, ija Abbaay Tsahaayyee fa’aan. Kana malees Suudaan Kibbaa, jaarmayaalee mootummaa Woyyaanee hidhannoodhaan dhabamsiisuu hawwaniif doohannoo laatteerti ykn laatuudhaaf fedhii agarsiisteerti oduun jedhu gara Jubaatii bayuu eegaleera. Kuni hangam dhugaa akka ta’e ammatti mirkaneeffachuudhaaf rakkisaadha. Garuu, yeroo kanatti qilleensi siyaasaa keessaa fi alaa bubbisu hundi Woyyaanetti kan fidaa jiru bowwoo qofa jedhu taajjabdoonni.
Rakkoon Suudaan Kibbaa, garee Salvaa Kiirii fi Riik Mashaar jidduu yeroo dheeraadhaaf ture, sodaa fi aabjuu mootummaa Woyyaanee isa yeroo dheeraa dhugoomsaa dhufeera. Itoophiyaan yeroo addaddatti, dhimma Suudan Kibbaa keessa harka naqataa fi waa’ee araara SK dubbataa turteerti. Yeroo kana gootu rakkoo fi naga dhabuun Suudaan Kibbaa Woyyaanee yaachsiee miti. Mootummaa naga argamsiisuuf hojjatau, isa mirga namaa fi dimokraasii argasmiisuuf tattaafatu taées miti. Jeeqamuun Suudaan Kibbaa humnoota akka ABO fi G7 doohannaa argamsiisa- deeebíanii miilaan akka gadi dhaabatan taasisa sodaa jedhu. Aabjuu kana kan Woyyaanee ganna hedduuf hirriba dhabsiise dhimma Suudaan Kibbaa keessa harka, miilaa fi waraana isii akka naqxu kan taasise.
Jarmayaaleen qawweedhaan Woyyaanee kuffisuuf carraaqan yeroo heddu biyya ollaa doohannaa isaaniif laattu dhabuun qabsoo geggeessan qancarsuu isaa dubbattu. Suudaan Kibbaa fi Itoophiyaa, akkasumas Masrii fi Itoophiyaa jidduu hariiroon jiru sadarkaa baay’ee hamaa jedhamu irra gayuun isaa amma ifatti bayeera. Kana booda, ABO fi G7 foddaa carraa banamaa jirtu kanaan hulluuqanii seenu moo hanga balballi guutummatti saaqamu taa’anii eeguun gaafii hundaati.
Jalqaba kan maxxanfame: Awash Post irratti
Previous Post Gabaasa Human Rights Watch kan bara 2016 Itoophiyaa ilaalchisee baasee Afaan Oromootiin
Next Post Untold number of Ethiopians are subject to human rights violations : Amnesty International USA